‘Afartii qof ee aan jimicsi samayn mid ayaa khatar ku jira’ WHO – hareerley News
‘Afartii qof ee aan jimicsi samayn mid ayaa khatar ku jira’ WHO
Posted on August 3, 2019 August 3, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Khubarada dhinaca caafimaadka ayaa walaac ka muujisay in wax aad u yar laga qabtay sidii loo yarayn lahaa saameynta ka dhalata dhaqdhaqaaq la’aanta ama jimicsiga ku yar dadka ku nool caalamka.
War bixin ay soo saartay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu qiyaasay in afar meelood hal meel oo ka mid ah dadka dunida – oo ah tiro dhan 1.4 bilyan oo ruux aysan samaynin jimicsi ku filan, tiradan ayaana sare u sii kacaysay tan iyo sannadkii 2001-dii.
Qiyaastan ayaa ka dhigan in guud ahaan dadka caalamka afartii qofba mid ka mid ah uu ku jiro halis dhimasho.
Dhaqdhaqaaq la’aanta ayaa sababta in dadka ay soo wajahaan xaalado caafimaad darro sida iney qofka ku dhacaan cudurrada wadnaha, nooca labaad ee cudurka macaanka ama sokorowga iyo noocyo ka mid ah cudurka cancer-ka.
Dalalka uu soo galo dhaqaalaha badan oo uu ka mid yahay Ingiriiska ayey dadkooda yihiin kuwa ugu badan ee aan dhaqdhaqaaqa samaynin.
Sidoo kale haweenka caalamka oo idil ayaa loo aqoonsaday iney yihiin kuwo ka jimicsi yar raga.
Cilmi baareyaasha hay’adda caafimaadka adduunka ee (WHO) ayaa macluumaadkan ku saleeyay xog laga uruuriyay ilaa 168 waddan oo dadkooda ay si shakhsi ahaan ah uga warramayeen xaaladahooda.
Khubarada ayaa ogaaday in waddamada dhaqaalahoodu sarreeyo, sida ingiriiska iyo Mareykanka, ay shacabkoodu khatarta ugu badan ugu jiraan saameynta ba’an ee ka dhalata dhaqdhaqaaq la’aanta.
Waddamada kale ee safka hore uga jira liiska jimicsi la’aanta waxaa ka mid ah Jarmalka iyo New Zealand.
WHO ayaa sheegtay in jimicsi la’aanta ay hadda noqotay dilaaga cusub ee bani’aadanka, maadaama ay dad fara badan ka dhaxleen cudurro aan la daaweyn Karin.
Waxa ay sidoo kale saameyn ballaaran ku yeelatay wakhtiga uu qofku noolaan karo, waxaana la sheegayaa in ay keeneyso cimri deg deg aad u u heer sarreeya.
Haweenka ayaa si guud uga dhaqdhaqaaq yar ragga marka la eego dhammaan dalalka laga sameeyay daraasaddan.
Hase ahaatee dalalka ku yaalla Bariga iyo Koonfurta-bari ee qaaradda Aasiya ayaa si weyn uga duwan, dhanka dhaqdhaqaaqana uga fiican waddamada kale ee ku yaalla Koonfurta Aasiya, Bartamaha Aasiya, Bariga dhexe iyo Waqooyiga Africa.
Dr Regina Guthold, oo hogaamineysay daraasadda WHO ayaa tiri “Marka laga soo tago khataraha caafimaad ee kale ee adduunka ka jira, wali wax hoos u dhac ah lagama arko dhibaatooyinka ka dhasha dhaqdhaqaaq la’aanta”
“Gobollada uu ku sii kordhayo xaddiga jimicsi la’aanta jirka ayaa nagu abuuraya walaac weyn oo ku aaddan iney soo food saaraan cudurro aan daawo lahayn.”
Dr Fiona Bull, oo iyadana ka mid ah khubarada daraasaddan qortay ayaa sheegtay in caqabado badan lagala kulmayo sidii meesha looga saari lahaa farqiga jimicsi ee u dhaxeeya raga iyo dumarka.
Dr Cali Macow Aweys oo BBC-da ay arrintaan ka wareysatay ayaa sheegay in cudurro fara badan oo halis ah ay ka abuurmaan jimicsi la’aanta.
“looma baahna in ay dadka iska fadhiyaan mar kasta waana in ay cunaan raashin nafaqo leh” ayuu yiri Dr Aweys.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Dhaqdhaqaaq la’aanta waxay sababtaa in aysan murqaha qofka shaqeynin ka dibna waxaa meesha soo gala cudurro halis ah oo ku dhaca kalyaha, beerka, wadna waxaana xitaa ka dhalan kara cudurka Kansarka”.
Dr Macow ayaa intaas ku daray in cudurka Sokorowga uu ka dhasho dhaqdhaqaaq la’aanta, balse dadku aysan intooda badan fahansaneyn.
Talooyin jimicsi oo loogu tala galay dadka ay da’dooda u dhaxeyso 19-64 sano.
Isbuucii samee ugu yaraan 150 daqiiqo oo jimicsi fudud ah ama 75 daqiiqo oo jimicsi culus ah.
samee jimicsiyo xoog leh oo qaata labo maalmood ama ka badan isbuucii, kuwaasoo kala furfuraya murqaha.
Iska jooji fadhiga badan, baddalkiisana gali dhaqdhaqaaqyo sahlan.
Waa maxay Jimicsi fudud?
1-Socodka oo la boobsiiyo.
3-In baaskiil lagu kaxeeyo dhul siman iyo dhul xoogaa kor u kacsan.
7-Iyo noocyada kale ee ciyaaraha fudud.
Maxaa ka mid ah jimicsiyada culus?
1-Rucleynta ama orodka.
2-Dabaasha deg degga ah.
3-In baaskiil loo kexeeyo si xawaare dheer ama in dalcad la saaro.
4-Tennis-ka halka ruux.
7-Iyo noocyada kale ee ciyaaraha adag.
Dalalka ay dhaqdhaqaaq la’aanta heerka ugu sarreeya ka joogto ayaa kala ah:
Dalalka ugu hooseeya ee dhaqdhaqaaqooda uusan heer xun joogin waxaa ka mid ah:
Uganda and Mozambique 6%
Khubarada ayaa dowladaha dalalkaas ku boorriyay iney dadaallo u sameeyaan sidii halistaas wax looga qaban lahaa.
Dr Melody Ding oo ka tirsan jaamacadda Sydney, oo isagu aan daraasaddan ka qeyb qaadannin ayaa sheegay in diiradda la saaray sare u qaadista dhaqaalaha, ayna taasi baddashay hannaanka nolosha.
Dr Mike Brannan oo hogaamiya hay’adaha u dhaqdhaqaaqa jimicsiga dadweynaha ee dalka Ingiriiska ayaa isagana ka dhawaajiyay in natiijada laga soo saaray daraasaddan ay muujineyso sida loogu jiro khatarta.
Dhul ay markii horeba Geeduhu Ku yaraayeen Oo Intii Kutaal La Googoynayo wax ka Ogow:-(Akhriso)
Posted on June 23, 2020 June 23, 2020 Author Hareerley News
Guud ahaan geyga Soomaalidu degto waxaa fara baas lagu hayaa dhirta, taasoo ilaahay bini-aadamka Ugu deeqay dhulkanka ku qurxiyay, dhirta, ayaa ah warshadda Ugu wayn ee soo saarta neefta layiraah Ogsajiinta, Oo lagama maarmaan u ah noolaha oo idil. Daraasado badan Oo la sameeyay ayaa sheegaya in meeliba meesha ay ka dhir badan tahay ka […]
Dadka Uu Khalkhalka-Maskaxeed ku dhoco Ayaa Bunka Madaw Caba, Daraasad Cusub
Posted on June 2, 2020 June 2, 2020 Author Hareerley News
Hadii aad bunka aad ku Cabto madaw, waxa suurtagal ah in aad tahay qof caafimaadkiisa jecel, laakiinse qofka Walxaha Rasiinka ama walxaha Cadeyska ku badan yihiina jecelna markaasi waa laguu yabaa in khalkhal maskaxeedka kugu dhaco, lakiinse qofka sidii loogu talo galay u cabaya waa qof naftiisa jecel. Arintan ayaa lagu sheegay daraasad cusub Oo […]
Arimaha Bulshada Maqaalo
Magafeyaasha Soomaaliyeed Ee Turkiga ku Nool:-(Akhriso)
Posted on August 21, 2019 August 21, 2019 Author Hareerley News
Dhaliyarada Afka Turkiga baratay, ee ku nool dalkan Turkigu, waxa ay dadka yimaadda u gaystaan tacaddiyo aan lasoo koobi karin. Tusaale ahaan, Dhakhaatiirta inta ay heshis la galaan ayay dadka dul saaraan lacag, lacagtaas oo aad u badan marka loo eego dadka danyarta ah ee halkan caafimaadka usoo raadsada. Kudarso oo, qofkaasi lacag turjubaannimo ah […]
Trump oo ka laabtay ninkii uu u xushay agaasimaha sirdoonka Maraykanka
Wararkii Ugu dambeeyay Howlaha Aaska Qaran Ee Marxuum Yariisow